ခန္ဓာကိုယ်အာမခံ:ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအာမခံထားဖို့ Sense သည် Make ပါသလား?
သင်သည်အစဉ်အဆက်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုအာမခံခြင်း၏ထင်ကြ? ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သေးသက်သေပြချက်မရရှိနိုင်ပေမဲ့, ကလူကြိုက်များ Juju ဂီတပညာရှင်ကြောင်းကောလဟာလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်, ဘုရင်ကိုဆန်နီ Ade က, အဲဒီလက်ချောင်းအချို့ကို dismemberment ၏အမှု၌ Naira ၏ကြီးမားသောသန်းပေါင်းများစွာအတွက်အာမခံထားသည်သူ၏ဂစ်တာ-အသီးအနှံကိုဆွတ်လက်ချောင်း. အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား? ထို Juju maestro နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်အများဆုံး Dexter ဂစ်တာ-playing အားဂီတပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဆောင်းပါနှင့် symphonic ဂစ်တာသောကများ Juju ဂီတသူ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိုးမိုး. နိုင်ငံခြားမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်, နိုင်ငံ Music ကို busty ဘုရင်မ, Dolly Parton ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအတွက်သူမ၏ကြီးမားသောရင်ခွင်အာမခံထားပြီမှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်; ဒီအတောအတွင်း, ပညာရှင် Gene Simmons, ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်, နှင့်အခြားနာမည်ကြီးတွေတို့တွင်အမိက္ခေလသည် Flatley သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေအာမခံထားပြီဟုသိနေကြသည်, bums, နှာခေါင်း, နှင့်အာမခံပေါ်လစီများအမြောက်အမြားများအတွက်တခြား "ယခင်နှင့်တန်ဖိုးရှိသော" ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း.
အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား? အကြောင်းပြချက်ဝေး-သတင်းသည်မဟုတ်ပါဘူး. ဤအာမခံထားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ, အဲဒီနာမည်ကြီးတွေမှ, သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ၏သတင်းရင်းမြစ်များနှင့်၎င်းတို့၏နာမည်ကျော် status များသည်၏အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ. ဤနာမည်ကြီးတွေဤကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကောင်းဝင်ငွေများကို generate သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအားနည်းစေမယ်လို့နားလည်ဖို့, သူတို့ကလည်းထို့ကြောင့်လျင်မြန်စွာသောသူတို့အဘို့ကြောက်လမှထွက်သောဤကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအာမခံထား, အာမခံလျော်ကြေးကြောင့်ဤကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများမှဝင်ငွေတစ်ခုခုဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဖုံးကိုနိုင်အောင်. သင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမှန်လျှင်ပိုကောင်းဒီကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, Cossy Orjiakor သူမ၏ကြီးမားသောရင်သားမပါဘဲအဘယ်အရာကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်? သူမ၏ကြီးမားသောရင်ခွင်နိုင်ဂျီးရီးယားနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးနှင့်အနုပညာသည်များအဖြစ်သူမ၏အမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချခြင်း-point များမှာ; သူမ၏သူမ၏ကြီးမားသောရင်ခွင်မှဖြစ်ပျက်ဘာမှမကြောက်ရွံ့ရန်အဘို့အဒါကြောင့်နားလည်နိုင်ပါတယ်, သူမကသူတို့သည်နိုင်ဂျီးရီးယားရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းများတွင်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဈေးကွက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုအာမခံရန်ဆုံးဖြတ်သည်လျှင်.
ယခု, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအာမခံထားဖို့သင် celebrity မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျှင်မည်သည့်သဘောမျိုးလုပ်ဘူး? အမှန်တရားကဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းမျှမသဘောမျိုးစေသည်ခြင်းဖြစ်သည်, သင်ကမောင်းသူအဖြစ်ကောင်းမြင်ကွင်းများအပေါ်မှီခိုအားထားသော်လည်း; တစ်ဦးကကွန်ပျူတာ programmer အဖြစ်သင်၏လက်ချောင်း; တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်နှင့်ကောင်းမွန်သောခြေထောက်တွေ. ခဲတောင်မှသင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအာမခံထားဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်လို့မဆိုအာမခံကု​​မ္ပဏီရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အနည်းငယ် မှလွဲ.. သင်ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်ကြီးပြီးအလွန်ကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြသည် မှလွဲ. သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအာမခံအလွန်စျေးကြီးဖြစ်နိုင်; ဒါပေမယ့်တန်းတူရည်တူအလွန်ကောင်းသောအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အငြိမ်းစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုသောကြောင့်သင်တို့တစ်ဦးအသက်အာမခံကြေးအဘို့အသွားနိုင်, နှင့်စသင့်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သင့်မိသားစုလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းလို. သင်တို့မူကားအသက်ကိုအာမခံများ၏အသံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်, သင်သည်အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်စက်ရုံကိုမတော်တဆမှုများအတွက်ဖုံးအုပ်ဇေဒကနု သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အလုပ်ခွင်မသန်စွမ်းမှုအာမခံအတွက်ဘေးဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်. လုပ်ငန်းခွင်တွင်မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ် dismemberment အာမခံနှင့်အတူ, သင်သည်အလုပ်၏သင်တန်း၌သင်တို့၏ခြေလက်အင်္ဂါသို့မဟုတ်မျက်မှောက်ဆုံးရှုံးလျှင်သင်လျော်ကြေးငွေရနိုင်. ဒီအများကြီးပိုတတ်နိုင်သောနှင့်သင့်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုအာမခံဖို့ကောင်းတစ်ဦးအစားထိုး, သင်တို့သည်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူနှင့်ထိုသို့သောမဟုတ်လျှင်အာမခံထားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု celebrity အတိုင်းသင်တို့နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမှတ်တံဆိပ်များမှာ.